G Talk အကောင်.တစ်ခု လုပ်မယ် | ဇော်မျိုး
MP3 & MP4 နှင်. Digital ပြဿနာ ဖြေ၇ှင်းနည်းများ →
G Talk အကောင်.တစ်ခု လုပ်မယ်
(gmail acc နှစ်ခု အဆင့်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း၇ပါတယ်)
invite mail ပို့တဲ့အဆင့်ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ အပို့ခံရတဲ့သူရဲ့ gmail ထဲမှာ ….(sender name) has invited you to openaGoogle mail acc ဆိုပြီးမေးလ်တစ်စောင် ၀င်လာပါလိမ့်မယ် (မ၀င်လာဘူးဆိုရင် လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပို့ ခိုင်းပေါ့ :P) ထိုမေးလ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ To accept this invitation and register for your account, visit ဆိုတဲ့စာတန်းလေးရဲ့ အောက်မှာ လင့်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် .. ထိုလင့်လေးကနေတစ်ဆင့်ဝင်ပြီးတော့ new gmail acc ကို ဟိုအရင် gmail acc တွေဖွင့်သလိုပဲ ဖွင့်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ(Sign Up တို. Get Start တို.တွေ.၇င်လဲနှိပ်ပြီး လုပ်လို.၇ပါတယ်)၊
အဆင်မပြေ၇င် အကောင်.ဖွင်.ချင်တဲ.နာမည် နဲ. ပြန်ပို.ပေး၇မဲ. မေးလိပ်စာ ချန်ထားခဲ.ပါ။
Filed under Gmail Tagged with G talk